Free Fire Rank Mode မှာသုံးဖို့အကောင်းဆုံးဇာတ်ကောင်များ | Codashop Blog MM
Home Games Free Fire Free Fire Ran...
Free Fire Rank Mode မှာသုံးဖို့အကောင်းဆုံးဇာတ်ကောင်များ
Free Fire Battle Royale မှာဆိုရင်နောက်ဆုံးရှင်ကျန်တဲ့သူသာအနိုင်ရမှာဖြစ်ပြီး ဒီလိုမျိုးရှင်ကျန်ဖို့အတွက်ကိုယ်နဲ့အကိုက်ညီဆုံး ဇာတ်ကောင်ကိုရွေးချယ်ပြီးဆော့သင့်ပါတယ်။အဲ့လိုဆော့မှလဲနိုင်မှာကိုး။ ခုချိန်မှာ Rank တင်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်၊ Rank တွေလဲတက်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီကောင်တွေနဲ့စမ်းဆော့ကြည့်ဖို့ပြောချင်ပါတယ်။
Skyler ရဲ့အကြီးဆုံးစွမ်းအားကတော့ Riptide Rhythm လို့ခေါ်တဲ့စွမ်းအားပါ ။အဲ့ဒီစွမ်းအားက မီတာ(50) အတွင်းမှာရှိတဲ့ Gloo နံရံငါးခုကို ပျက်စီးနိုင်စေတယ်။ ပြီးတော့ ပျက်စီးသွားတိုင်းမှာ Health Power ကို recovery အဖြစ်ပြန်ရတယ်။နောက်ပိုင်း late game တွေရောက်လာရင်တော့ တစ်ဖက်ကပြိုင်ဖက်အနေနဲ့ ဒီစွမ်းအားကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲလောက်တယ်။
တကယ်လို့ကိုယ့်အဖွဲ့က Aggressive ပုံစံပြင်းပြင်းထန်ထန် ကစားမယ်ဆိုရင်တော့ clutch heal effect လဲပါတာမို့ ကိုယ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ teammates တွေအတွက်တော်တော်ကိုအသုံးဝင်မှာပါ။ Skyler ကိုဘယ်လို ကစားသမားတွေနဲ့ပြီးဆော့သင့်လဲဆိုတော့ Jota တို့လို၊ Moco တို့လို ကစာသမားတွေနဲ့တွဲပြီး Combo အနေနဲ့ဆော့သင့်ပါတယ်။
Alok ရဲ့ Aura of drop the beat ဆိုတဲ့ skill ကတော်တော်ကြမ်းတဲ့ skill တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်။ ဘာလို့လဲဆို တော့ မဟာမိတ်တွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုနှုန်းကို 10% လောက်တိုးပေးတဲ့အပြင် စစဆော့ခြင်း basic level မှာဆိုရင် Health Power5ခုကို5second စာပြန်ပြီး restore လုပ်ပေးသေးတယ်။ တကယ်တော့ Alok ကိုချက်ချင်း
လိုချင်တယ်ဆိုပြီးဖြစ်သွားစေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ Drop the beat ကြောင့်ပဲ။ အမြင့်ဆုံး level 60 လောက်ရောက်သွားရင်ကိုယ်ရော ကိုယ့်အသင်းသားတွေအတွက်ပါအကျိုးရှိသွားတယ်။ Battle တွေထဲမှာလဲကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီး backup လုပ်လို့ရသေးတယ်။အ ကွာဝေးအနီးနားမှာချမယ်ဆိုရင် Alok ကသူ့ရဲ့
healing ability နဲ့ extra movement ကိုသုံးနိုင်တာမလို့ Jai တို့ Hayato တို့လို့အကောင်တွေကိုမြန်ဆန်စေဖို့တွဲဆော့သင့်ပါတယ်။
Survival game ဆော့တယ်ဆိုမှတော့ ကိုယ်ရှင်သန်ဖို့အတွက် အားသားချက်တစ်ခုခုရှိထားတော့ကောင်းတာပေါ့။
ဥပမာပြောရရင် enemy နဲ့ကိုယ်နဲ့ပဲကျန်တဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချုံပုတ်လိုမျိုးပြောင်းထားပြီးပုန်းနေမယ်၊ ပြီးမှသူ့အလစ်မှာဝင်ချလိုက်မယ် ဒါမျိုးပေါ့။ Wukong ရဲ့ Camouflage ဆိုတဲ့စွမ်းအားကတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပါ။ အဲ့တော့ အသက်ရှင်ကျန်ဖို့အခွင့်ရေးများများလိုချင်တယ်ဆိုရင် Monkey King ကိုရွေးတာပိုကောင်းမယ်။
ပြောရမယ်ဆိုရင် သူ့စွမ်းအားက ဘက်စုံသုံးလို့ရတယ်။ အထူးသဖြင့် အနီးကပ်တိုက်တာတွေမှာ ဆိုပိုပြီးကောင်းတယ်။ Surprise Attack တွေတိုက်လို့ရတော့ တော်တော်အဆင်ပြေတာပေါ့။ မြန်မြန်လည်း ထွက်ပြေးလို့ရသေးတယ်။ နောက်ပိုင်း Late Game ရောက်လို့ ကြမ်းလာပြီဆိုရင် ပြိုင်ဘက်က Wukong နဲ့ချဖို့ကို တော်တော်လေးသတိထားပြီးမှ တိုက်ရမယ်ထင်ပါတယ်။ မှတ်ထားရမှာက ကိုယ်က ခြုံပုတ်ပုံပြောင်းထားတယ်ဆိုရင် ရန်သူကို စတိုက်ပီဆိုတာနဲ့ အဲ့ဒီ့ခြုံပုတ်ပုံကနေ မျောက်ပုံကိုပြောင်းသွားမှာပါ။ ရန်သူကရှုံးသွားပီဆိုရင်‌တော့ Cool down ကို Reset ပြန်ချလိုက်ပါတယ်။
Jiu-Jitsu master လို့သူကိုယ်သူပြောလို့ရတဲ့ K ကတော့ rank mode မှာရွေးချယ်သင့်တဲ့ Character တစ်ခုပါ။သူ ရဲ့ Master of All ဆိုတဲ့ Skill က ကစားပွဲကို ပြောင်းနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ မဟာမိတ်တွေကို EP50 အထိပေးနိုင်တဲ့အပြင် Jiu-Jitsu mode ထဲ ရောက်နေပီဆိုတာနဲ့ သူ့ရဲ့ ၆ မီတာအချင်းပတ်ပတ်လည်မှာ ရှိတဲ့မဟာမိတ်တွေရဲ့ EP ပြောင်းလဲနှုန်းကို 500% လောက်ထိတိုးပေးနိုင်တယ်။ ဘယ်နေရာမျိုးမှာအသုံးဝင်လဲဆိုတော့ပြင်းထန်တဲ့ Gun Fights တွေမှာအသုံးဝင်တယ်။
K ရဲ့စွမ်းအားတွေကို Kelly ရဲ့ spiriting speed ဒါမှမဟုတ် Moco ရဲ့စွမ်းအားတွေအတွက်ကူပြီးသုံးပေးသင့်တယ်။ ခုပြောလိုက်တဲ့ စွမ်းအား Combo အတွဲတွေကကာကွယ်ရေးအတွက်တော်တော်ခံနိုင်တဲ့ Combo တွေလို့ပြောရမယ်။ ပြင်းပြင်းထန်ထန် Aggressive ဆော့တဲ့ Teammates တွေနဲ့‌တွဲဆော့ရင်တော့ K ရဲ့စွမ်းအားတွေကသူ့ကို battle မှာကြာကြာ‌ဆေ့ာနိုင်ဖို့ အကောင်းဆုံး Support ပေးနိုင်တယ်။
ခေတ်မှီတဲ့စက်ရုပ်ပုံစံအမျိုးသမီးကတော့ တိုက်ပွဲတွေမှာသိပ်ကို အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ သူ့ရဲ့ Survival စွမ်းအားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Thrill of Battle က20 EP ကို Health Power အဖြစ် 4s အတွင်းပြောင်းပေးနိုင်တဲ့အပြင် စစဆော့ချင်းမှာ cool down 10s ပါထားပေးထားသေးတယ်။ Aggressive ဆော့တဲ့ player တွေဆိုရင်တော့ A124 ကို Rank Mode မှာရွေးသင့်တယ်။ သူ့စွမ်းအားမြင့်လာလေလေ Game ပွဲကပိုကြမ်းလာလေလေပဲ။ သိထားရမှာက နောက်ဆုံး Level ရောက်ရင် EP ကနေ HP ပြောင်းပေးပေမဲ့အချိန်ကတော့နည်းနည်းကြာပါတယ်။
လုံးဝကိုကြမ်းတဲ့ အပြေးစွမ်းရည်မျိုးကို ရှာနေတယ်ဆိုရင်တော့ Kelly ဆီမှာတွေ့ရမှာပါ။ သူ့မှာ Dash လို့ခေါ်တဲ့ Survival Ability တစ်ခုပါတယ်။ အဲ့စွမ်းအားကနောက်ဆုံး Level ရောက်ရင်ပြေးတဲ့အရှိန်ကို 6%ထိတိုးပေးတယ်။ နောက်ထူးခြားချက် Skill တစ်ခုကတော့ မြန်မြန်ဆန်ဆန်လှည့်နိုင်ပြီး အန္တရာယ် Zone ထဲရောက်နေရင် လွယ်လွယ်လေးထွက်လို့ရတာပါပဲ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အတွက်ပဲ အသုံးဝင်တဲ့ Passive Skill ဖြစ်လို့ Benefit ရဖို့အရမ်းဆော့စရာမလိုပါဘူး။ အရှိန်မြန်မြန်နဲ့ ရန်သူကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရှင်းချင်တဲ့ Player မျိုးဆိုရင်တော့ Kelly ကိုလုံးဝ‌ရွေးသင့်ပါတယ်။ ဘယ်လို Character မျိုးရဲ့ Skill မဆိုတွဲသုံးလို့ရတာဖြစ်လို့ ရွေးတာမမှားပါဘူး။ Alok တို့ Moco တို့နဲ့တွဲရင်တော့ပိုပြီးကြမ်းတဲ့ အသင်းအဖြစ်ဖွဲ့လို့ရတာပေါ့။
Codashop မှာသင့်ရဲ့ Free Fire Account ကို Top Up လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦး။ လွယ်ကူမြန်ဆန်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရပါတယ်။
Previous articleWild Rift မှာ မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင် Rank တက်နည်းကိုမျှဝေပြီး 450 Wild Cores ကံထူးနိုင်မယ့် အစီအစဥ်!
Next articleသင်ဟာ Free Fire ကိုအခုမှစကစားမယ့် Newbie တစ်ယောက်လား? Free Fire မှာ Noob တွေကိုရှာနည်း + Rank တက်စေမယ့် အကြံပြုချက်များ